५ माघ २०७५ शनिबार/ ०२:४२
भेंडा–बाख्रा व्यवसायबाट वार्षिक साढे ३३ करोड आम्दानी
नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला जातका फलफूल रोपिदै
डेढ लाखबाट सुरु गरेका नर्सरीको मूल्य एक करोड
एकातिर, प्लास्टिक उद्योगलाई संचालन स्वीकृति दिने, अर्काेतर्फ, निषेधित हुनुपर्छ भन्दै अभियान चलाउँने पनि सरकार !
कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग गर्ने सहकारीलाई सरकारले सहयोग गर्ने
अन्न उत्पादनगर्दा छ महिनापछि खान नपुग्ने खेतमा नर्सरी लगाउन थालेपछि वार्षिक बीस लाख आम्दानी
सुन्तलाका बोट सुक्न थालेपछि सल्यानका किसान चिन्तित
काठमाडौँ, २७ पुस । हुन त नेपाल सरकारसंग कृषि बनको अवधारणा नै छैन । यदाकदा बन मन्त्रालयमा छलफल हुने गरेपछि यसले व्यवसायिक रुप लिन सकेको छैन । नीजि कम्पनीहरुले गरेका केही बन नभएका होइनन्, तर भनेजस्तो तरिकाले नेपालमा अझै यसको विकास हुन सकेको छैन । जस्तै मलेसियाको उद्हारण लिने हो
काठमाडौं, २४ पुस । कुखुरा, माछा, बंगुर, गाईभैसी पालन वा अन्य कुनै कृषि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ ?, वा, कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सोच राख्दै हुनुहुन्छ ?, कि, कृषि पेशा गर्दा ढंग नपुगेर घाटा व्यहोरी रहनु भएको छ ? यदि त्यसो हो भने, तपाईहरु सवैलाई सुवर्ण अवसर छ । कृषिकर्म गर्नेकालागि
काठमाडौँं, २३ पुस । टीकाथलीका कला राईले चार आनामा घर बनाएकी छन् । उनले तीन साईटमा आफ्नो जग्गा खाली राखेकी छन् । त्यो सानो ठाउँमा तरकारी बाँली लगाएर साध्य भएन । त्यही भएर उनले सजावटी विरुवाहरु रोपेकी छन् । पछिल्लो समय सुन्तला, मुन्तलाहरु जस्ता विरुवाहरु पनि सानै बोटमा पनि फल्ने
यार्सागुम्वा लगायतका जडीबुटी अवैधानिक बाटो हुदै चीनतर्फ लैजानेक्रम बढ्दो
काठमाडौं, १८ पुस । ठूलो परिमाणमा यार्सागुम्बालगायतका वहुमुल्य जडीबुटीहरू अबैध तरिकाले ताक्लाकोट नाका हँदै चीन/तिब्बत तर्फ जाने गरेको पाईएको छ । राज्यले यसबाट ठूलो राजश्व घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न जिल्लामा पाइने विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू चोरी–निकासीका हुदा राजश्वमा कमी आएको हो । नेपालले जडिवुटी, काठ र पर्यापर्यटनवाट आर्थिक
नेपाली अर्गेली जापान निर्यात
बिहीबार, मङ्सिर २७, २०७५
बुधबार, मङ्सिर १९, २०७५
मंगलबार, मङ्सिर २५, २०७५
कृषि र वन सङ्काय तर्फ स्नातक तहका कक्षा सञ्चालन अब निजी शैक्षिक संस्थालाई पनि अनुमति
शनिबार, मङ्सिर २९, २०७५
रुकुम पूर्वका किसान प्राविधिकसहित स्याउसँगै तरकारी खेती गर्दै
प्रदेश सरकार कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
हिमपातको भरमा बाँचेका पश्चिम नेपालका बासिन्दा हिउँ परेपछि हर्षित
कृषि विकास बैंक पुग्यो कर्णालीका विकट ठाउँमा
गाई किसानका कथाव्याथा समेटिएको चलचित्र गोपीको ट्रेलर सार्वजनिक (ट्रेलर सहित)
बिहीबार, पौष ५, २०७५
काठमाडौं, ५ पुस । नेपालमा चलचित्र बन्नेक्रम बढ्दो छ । वर्षमा औसत सयको हाराहारीमा चलचित्र बन्छ । तर, ति प्रायः
‘द आर्ट अफ फेसन ड्रपिङ’ क्याम्पमा सुन्दरीहरु (फोटो फिचर सहित)
अहिले जारी मिस यूनिभर्समा नेपालकी मनिता उत्कृष्ट दशमा पर्न सफल